B2B मिन्टिगोको साथ प्रोफाइल र प्रोस्पेक्ट गर्दै Martech Zone
अखबारको उद्योग छोडेपछि मेरो पहिलो जागिरले बी २ बी विक्रेताहरूको लागि सम्भावित डाटाबेस विकास गरिरहेको थियो। केही तेस्रो पार्टी उपकरणहरू प्रयोग गरेर, हामीले तपाईंको ग्राहक आधारमा फरमोग्राफिक लक्षणहरूमा अनुकूल सूचकांक विकास गर्न साधनहरू विकास गरेका छौं। अर्को शब्दहरुमा, हामी तपाईको आदर्श ग्राहकहरुलाई राजस्व, कर्मचारी संख्या, उद्योग कोड, सेवामा बर्ष, स्थान र कुनै अन्य जानकारी पाउन सक्दछौं।
एकचोटि हामीलाई थाहा थियो कि आम ग्राहक कस्तो देखिन्छ, हामी ती प्रोफाइलहरूको प्रयोग डाटाबेस स्कोर गर्नका लागि गर्नेछौं। तपाइँले एक खेलको साथ आउनुपर्दैन, तपाईलाई गर्नुपर्ने सबै संभावना सूचीहरू क्रमबद्ध गर्नुपर्‍यो ... जसले तपाइँको क्लाइन्टहरू जस्तै सबैभन्दा नजिकको र आफ्नो ग्राहकको जस्तै कम्ती देखिन्थ्यो। यो अलि अलि जटिल भएको थियो किनकी इन्डेक्स र स्कोरिंगको समावेश मल्टिभेरिएट इन्डेक्सहरू ... तर ती आधारभूत हुन्।
यो मान्छे देखिन्छ मिन्टिगो यो पद्धति लिईएको छ, यसलाई वेबमा लागू गरिएको छ, र यसलाई स्टेरोइडमा राखेको छ!
यो मिन्टिगो साइटले तिनीहरूको सेवा उपयोग गर्नका लागि reasons कारणहरू सूचीबद्ध गर्दछ:
सहि श्रोता सम्म पुग्नुहोस् - दुबै व्यक्ति र कम्पनीहरूमा पूर्ण र सही जानकारीले तपाईंलाई गेटकीपरहरूलाई बाइपास गर्न र सीधै निर्णयकर्ताहरूसँग सम्पर्क गर्न, पाइपलाइन सुधार गर्ने दर, र बिक्री चक्रलाई सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
पाइपलाइन दक्षता बढाउनुहोस् - मिन्टिगो ग्राहक सर्वेक्षणका अनुसार अधिक मिन्टिगोले अन्य स्रोतहरूको तुलनामा बिक्रीमा रूपान्तरण गर्दछ, प्रति दिन %०% बढी बिक्री।
सजिलो, अनुमानित नेतृत्व प्रवाह - यसले मासिक नेतृत्व क्षमता भर्न तपाइँलाई minutes मिनेट लाग्छ - मिन्टिगोले मिन्टिगो-प्रमाणित सीसाको पूर्वानुमान प्रवाहको साथ भारी लिफ्टि do गर्न दिनुहोस्। तपाईंको मार्केटिंग स्टाफले बढि नेतृत्वमा प्रक्रिया गर्न सक्छन् विश्वासका साथ उनीहरूको पाइपलाइन सधैं भरिनेछ।
छोटो बिक्री बिक्री - मिन्टिगोले प्रत्येक सम्पर्कमा अधिक अन्तर्दृष्टि पैक गर्दछ किनकि प्रत्येक नेतृत्वले तपाईंको सब भन्दा बढि खरीददारको प्रोफाइलसँग मेल खान्छ। मिन्टिगो-प्रमाणित नेतृत्वले बिक्री टोलीहरूलाई उनीहरूले प्रभावकारी खाता योजनाको लागि आवश्यक जानकारी पुर्‍याउँछन् र मार्केटरहरूलाई विभाजित अभियानहरूको लागि लक्षितमा शून्य दिन्छन्।
नयाँ राजस्व स्ट्रिमहरू उत्पन्न गर्नुहोस् - मिन्टिगोले १० करोड भन्दा बढी सम्भावित कम्पनीहरूलाई स्क्यान गरेर लुकेका बजार सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्दछ, केवल साधारण फर्मोग्राफिक जानकारीको सट्टा गहिरा विशेषताहरूको आधारमा मेल खानेहरू फेला पार्दछ। ग्राहकहरूले पत्ता लगाए कि मिन्टिगो लीडहरूको of ०% सम्म तिनीहरू नयाँ थिए - बजारमा पनि ती सूचीहरूको प्रयोग गरेर राम्ररी अन्वेषण गरिसकेका छन्।
मित्र र ग्राहक आइजाक पेलेरिन, टिन्डरबक्समा राजस्व मार्केटिंग प्रबन्धकलाई विशेष धन्यवाद, मलाई यो सेवा दर्साउनुभएकोमा। टिन्डरबक्स हो बिक्री प्रस्ताव सफ्टवेयर यसले तपाईंको लागि बिक्री प्रस्तावहरू सिर्जना गर्न, सम्पादन गर्न र ट्र्याक गर्न सरल बनाउँदछ। हामी यसलाई प्रयोग गर्छौं र हामी यसलाई प्रेम गर्छौं!
टैग: b2bb2b नेतृत्व उत्पादनb2b प्रोस्पेक्टि।b2b स्कोरिंगमिन्टिगो
WordPress का लागि लेखकत्व प्लगइन